Maroodi-jeex Oo U Gudbay Ciyaarta kama Damaysta, Markii ay 2-1 Kaga Tallaabsadeen Xulkii Gabiley | Salaan Media
Maroodi-jeex Oo U Gudbay Ciyaarta kama Damaysta, Markii ay 2-1 Kaga Tallaabsadeen Xulkii Gabiley
HARGEYSA (SM)- Xulka Kubadda Cagta ee Gobolka Maroodijeex (Hargeysa) ayaa galabta u gudbay ciyaarta kama damaysta ee tartanka Ciyaaraha goboladda Somaliland, ka dib markii ay 2-1 kaga Talaabsadeen xulka Gobolka Gabiley oo ay wada yeesheen ciyaartii semifinal-ka.
Ciyaartan oo aad u xamaasad badnayd isla markaana ay laba Tarabuunba buuxeen, waxay ahayd ciyaar adag oo labada xulba ay ku jireen feejignaan dheeraad ah isla markaana ahayd ciyaar farsamadeedu saraysay oo labada xulba ay is ceshanayeen.
Ciyaartu waxay qeybtii hore ku dhammaatay barbar dhac eber iyo eber ah, hase yeeshee markii qeybtii labaad la iskugu soo noqday ayaa xulka gobolka Maroodi-jeex waxay heleen goolkoodii koowaad oo uu u dhaliyay ciyaar yahanka la yidhaahdo Siciid Fiyeera oo khadka dhexe ka ciyaara.
Daqiiqado ka dib ayaa ciyaar yahahanadda xulka Gabiley ay ka faa’iideeyeen kubad qurux badnayd oo ay aad iskugu dhiib-dhiibeen, waxaana goolkii bar-bar dhaca u dhaliyay Khadiir Mustafe oo ka mid ah weeraryahanadda gobolka Gabiley.
Gabo-gabadii qeybtii labaad ee ciyaartan waxa xulka Gobolka Maroodi-jeex u dhaliyay goolkii labaad ee Guusha Ciyaaryahanka Cabdi Riyaad oo ka mid ah weeraryahanadda gobolka Maroodi-jeex, sidaasna waxa ciyaarta kama dambaysta ugu soo baxay xulka Maroodijeex oo haysta horyaalka ciyaaraha kubaddaha cagta iyo kollayga ee tartanka goboladda Somaliland.